Ukucaciswa kweekhamera ezintathu zeGPS S10 kuhluziwe | I-Androidsis
Oko uHuawei wasungula i-smartphone yokuqala eneekhamera ezi-3, Inkampani yaseAsia isete umkhwa kwaye kubonakala ngathi ngoku bonke abavelisi banomdla wokuyamkela. Sithethile iinyanga ezininzi malunga nokuba inkampani yaseKorea i-Samsung izakufezekisa iikhamera ezintathu nangaphezulu kwiflegi yayo okokuqala.
Kodwa njengoko besikuxelele kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, imodeli efumene iikhamera ezintathu ayikhange ibe yenye yeeflegi zenkampani, kodwa ibiyiGalaxy A7. I-Galaxy S10 iya kuphumeza le nkqubo yeekhamera ezintathu, inkqubo esele ikho ziya kuba yintoni iinkcukacha zayo ezihluziweyo, iinkcukacha esikuxelela zona ngezantsi.
Ngokwokuvuza, eyona nto iphambili kwi-Galaxy S10, Kuya kufana nento esinokuyifumana ngoku kwi-Galaxy S9, kunye ne-12 mpx yesisombululo kunye nokuvula okungafaniyo kwe-f / 1.5 / 2.4 kwaye kuya kubandakanya i-optical stabilizer. Inzwa yesibini yeGalaxy S10 iya kuba yinqanaba elibanzi, kunye nesisombululo se-16 mpx, ukuvula kwe-f 1.9 kunye ne-123 degrees yombono ngaphandle kwe-optical stabilizer. Inzwa yesithathu iya kuba yi-13 mpx ngokuvula kwe-2.4 f kunye ne-45 degrees yombono nge-stabilizer ye-optical.
Njengoko besikwazisile ngaphambili kwi-Androidsis, kubonakala ngathi inkampani yaseKorea ifuna ukwandisa inani leemodeli zeflegi yayo, ukuze itsale abathengi abaninzi ngangokunokwenzeka, kungoko siza kubona i-S10 mini ngokusebenza ngokungqongqo ukubanakho ukuziqhelanisa neepokotho ezingathathi ntweni.
Ukuphehlelelwa kweGPS S10 kucwangciselwe ukuqala konyaka olandelayo, mhlawumbi kumbhiyozo we-MWC owenziwa minyaka le e-Barcelona kwaye oko kwenzeka ekupheleni kukaFebruwari. Okwangoku, kude kufike umhla wokubonisa, siya kukunika ulwazi ngako konke ukuvuza okwenzekayo, kwaye ngokuqinisekileyo ayizukuba mbalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Ukuchazwa kweekhamera ezintathu zeGPS S10 kuhluziwe
Yazi indawo okuyo kwaye ungalahleki kwezi mephu zingakholekiyo kunye neeapps zokukhangela kwiVenkile yokudlala